We She Me: မင်္ဂလာ သတင်း
thae - 5/25/08, 1:55 AM
Reallya"Min-ga-lar" news!!!
May the whole family be happy and healthy....
Thandart - 5/25/08, 1:59 AM
မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိကြောင်းသိရလိုဝမ်းသာပါတယ်။ သားလေးကချစ်စရာလေး။
ဇနိ - 5/25/08, 1:59 AM
မိခင်ရော ကလေးရော ကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာလှပါတယ်။
စစ်ကိုင်းသူ - 5/25/08, 2:03 AM
Ko Andy ရေ congratulation ပါ။ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အမျိုးသမီးလဲ အရင်တစ်ခါလို မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့။ သမီးရော၊ သားရော ရသွားပြီဆိုတော့ ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ ကောင်းလိုက်တာ။ အားရင် သားလေးမွေးတဲ့အကြောင်းလဲ ရေးပါဦး။ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော။
imaginary clouds no2- 5/25/08, 2:17 AM
pmmw - 5/25/08, 2:23 AM
ဝမ်းသာပါတယ် အစ်ကိုရေ။ တကယ် မဂ်လာသတင်းပါဘဲ။ အစ်ကိုတို့ မိသားစု ကျန်းမာပါစေ...
N3 - 5/25/08, 4:03 AM
TZA - 5/25/08, 5:07 AM
ဘာလေးလဲ.. ဘာလေးလဲ.. ယောက်ျားလေး.. ယောက်ျားလေး.. ဟီးဟီး.. ကိုယ်တိုင်မမွေးဖူးသေးပေမယ့် ကိုအန်ဒီတို့လင်မယားနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းသာမိတယ်ဗျား..
(ဒါနဲ့ဟိုမစ္စတာမိုးတိမ်က ဘာကိစ္စနှစ်ခါတိတိအော်ရတာလဲ၊ အမွှာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့)
Ko Paw - 5/25/08, 8:51 AM
မင်္ဂလာသတင်းပါဘဲ။ ကလေးရောမိခင်ပါ ကျန်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Anonymous - 5/25/08, 10:10 AM
Tun Myo Hlaing - 5/25/08, 12:09 PM
မဇနိ - 5/25/08, 1:38 PM
ကိုအန်ဒီတို့ we အုပ်စု တိုးလာပြီပေါ့။
အစ်မရော ကလေးပါ နေကောင်းကျန်းမာပါစေ။
Kay - 5/25/08, 1:53 PM
၀မ်းသာ ပါတယ် ကို အန် ဒီ နဲ့မိသားစု ရှင်။
ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ကြီး ဖြစ် ပါစေ။
Yee - 5/25/08, 2:26 PM
်အ ဖေ နဲ့ သာ: မွေ: လ တစ် လ တည်: ဎေါ့။
We She Me မှာ He အ ကြောင်: တွေ စောငိ့ ဖတ် အုံ: မယ်။
tayzar - 5/25/08, 3:08 PM
၀မ်းသာပါတယ် အကိုရေ။ အကို့သားလေး ကော နာမည်စဉ်းစားနေကြပြီလား။ ၀တုတ်လေးပဲ ချစ်စရာလေးနော်။
Ko Thagyee - 5/25/08, 11:31 PM
ဝမ်းသာတယ်ဗျာ ။ ကို အန်ဒီ တို့မိသားစု ဘဝလေးက
အရမ်း ပျော်စရာ ကောင်းသွားပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ခုလာမဲ့
သူကြီး နဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးစ နိုင်ငံ
sawphonelu - 5/26/08, 12:14 AM
ဝမ်း သာ တယ် ဗျို့ ။ အမေ တူ လေး ပဲ ။
MrDBA - 5/26/08, 1:03 AM
khin oo may - 5/26/08, 3:45 AM
pannwe - 5/26/08, 9:33 AM
nu-san - 5/26/08, 1:28 PM
Blog မလည်ဖြစ်တာနဲ့ မသိလိုက်ရဘူး။ ပျော်စရာကြီး... မြင့်မြတ်နိုးလေး မောင်လေးရတော့ ပျော်နေပြီလား။ မိခင်ရောကလေးပါ ကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာတယ် Andy ရေ.. Congratulation!!!
War War - 5/26/08, 1:30 PM
Congratulation Ko Andy andama!!!!
Su - 5/26/08, 2:37 PM
Operation-Nargis - 5/26/08, 5:26 PM
ပီတိ - 5/26/08, 5:30 PM
Congratulation ကိုအန်ဒီ နဲ့ မိသားစု
yazakyaw - 5/26/08, 6:31 PM
့Yan Naing - 5/26/08, 7:04 PM
ကိုအင်ဒီ ရေ... ၀မ်းသားတယ်ဗျာ... ချီးကျူးပါတယ်.. (ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ)...အဲ... ဘာ ဆက်ပြီး ဆုတောင်းပေးရင် ကောင်းမလဲ...
ဇေယျာ - 5/27/08, 2:09 AM
pandora - 5/27/08, 9:30 AM
How to catch you up?
Mhaw Sayar - 5/27/08, 11:40 AM
dare2fight - 5/27/08, 12:54 PM
i am just mare blog reader of your blog. i come and read here regularly and feel like i am also member of you r "wesheme" group.
Congratulation for your new born baby !!! Wish all the best he will bring! :)
စိုးထက် - Soe Htet ! - 5/27/08, 3:00 PM
Sorry for my belated wish !
မုတ်သုန် - 5/27/08, 10:34 PM
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုရေ...nlay
Andy Myint - 5/28/08, 5:42 PM
လာရောက် လည်ပတ် အားပေး ဆုတောင်းပေးကြသူ အားလုံးကို We She Me မိသားစု တစ်စုလုံးက ကျေးဇူး အထူးတင်ပါကြောင်း :)
ဝေတိုး - 5/28/08, 11:26 PM
To growing wesheme family,
dilo bear - 5/29/08, 12:22 PM
Babies are bits of stardust, blown from the hand of God..congrats on the new additional stardust to the family!..
really happy for u..on suchablessed news..
Anonymous - 5/29/08, 1:08 PM
Anonymous - 5/31/08, 10:38 PM
Both Myat Noe & he hasarounded cute face. Congratulations!!
Waiting to read your new posts about WeSheMe new family memeber.